IPUBG Iselfowuni izakuqala isizini yesithathu ngale Lwesithathu | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Imidlalo ye-Android, Izaziso, PUBG Imfono
Kwezi ntsuku zidlulileyo kubekhona udideko olukhulu ngokuqala kwexesha lesithathu lePUBG Mobile. Ngokweendaba zeMidlalo yeTencent, ixesha elitsha liza kuqala izolo, kodwa khange lenze njalo.
Ukusuka kwimithombo eyahlukeneyo yaseburhulumenteni, ngoku siyazi ukuba ixesha lesithathu liza kuqala ngoLwesithathu olandelayo, ngokuchanekileyo nge-22 ka-Agasti, kanye Ukupasa kwexesha elitsha. Ixesha elitsha eliza kuzisa ukuseta kwakhona amanqanaba kunye nolunye uthotho lwamabhaso abadlali abanike konke okwesibini abaya kufumana.
Ukupasa okutsha kwe- Ixesha leRoyale liza kuqala ngale Lwesithathu, ke lungisa isipaji sakho ukuhlawulela ipremiyamu yokupasa ukuba ufuna ukufikelela kumxholo omtsha ngohlobo lolusu kunye nezo zithambiso zithandwa kangaka kwezi ntlobo zemidlalo.
IPUBG Mobile oyifumeneyo iya kuyenza inyanga enye uhlaziyo olunamanzi kwaye ngoku kuzakuqala ixesha lesithathu. Amanqanaba asethwe kwakhonaNangona kungekho mfuneko yokoyika, kuba ukuba ufikelele kwinqanaba leCrown ngeli xesha lonyaka, uza kuya eDiamond njalo njalo. Oko kukuthi, bathoba oko kufezekiswe kwinqanaba elinye.
Kwakhona, ngolwe-Lwesithathu 22 apho ixesha lesithathu le-PUBG Mobile liqala, unako fumana zonke izifuba ophumeleleyo njengokuba ubupasile kwinqanaba. Awuzukufumana zixhobo zithile, kuba oku kube nakho ukuvulwa ngokuphumelela uloyiso ezintlanu xa ufikelele kwinqanaba.
Ke hamba uyilungiselela beka iibhetri kwaye unike yonke into kwisizini entsha. Kungekudala siza kuba nohlaziyo olutsha ngezixhobo ezingaphezulu kunye nemephu entsha: iHancook.
PUBG Imfono, ngeendleko zabagculi, ikwimo entle ngokunika i-Android umtsi omkhulu kumgangatho wokudlala. Ngoku, kuhlala kuphela ukulinda ixesha lesithathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » IPUBG yeXesha leSelfowuni lesi-XNUMX liqala ngoLwesithathu